Barashada Cilmiga Baabuurta: Matoorka Iyo Olyada Baabuurta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — March 31, 2020
Qoraalkaan waa kii labaad ee ku saabsanaa barashada cilmiga baabuurta. Haddii aad u baahan tahay qoraalkaan kii ka horeeyay fadlan booqo halkaan: https://afrikaan.so/archives/14407
Maqaalkan waxaa uga hadli doona:
Iyo Olyada Baabuurta
Matoorku waa shayga keena awooda baabuurku kusocodo. Matoorku waxa uu uqaybsamaa sadex qaybood oo waawayn oo kala ah:
Taystaaato: waa qaybta sare ee matoorka oo ay kuxiran yihiin Albare kaamka, Waalasha, Dhabanta hawada, Kaalbeedharka, Balaagyada, Arxaanka, Waalasha hawada, Jiktarada Irbadaha, Isbiindadaha iyo agab kale. Waxaana daboola Kulbeerka.
Bolooko: Balookadu waa qaybta ugu wayn matoorka, dhanka sare waxaa uga xiran galaasyada iyo bostonka oo kudhexjira, dhanka hoosane waxaa uga xiran kiriinka sidoo kale waxaa kuxiran ama ay caawisaa birta wareejira kiriinka.
Balookadu waxa ay leedahay daldaloolo iyo dhuumo ay maraan biyaha qaboojiya galaasyada sidoo kale balookada qaybteeda sare waxa ay uqaabaysan tahay sadex qaab oo kala ah, qaab siman, qaab toosan iyo qaab V ah waana sida ay Bostomadu ugalaan balookada.
Sootakoobo: waa halka ay kukaysan tahay Olyada Baabuurku isticmaalo, waana qaybta hoose ee Matoorka.
Balookada naaftada ah: Balookada naafytada ahi waxay uga duwan tahay tan baasiinka ah waxay leedahay (Kuular (Qaboojiye), waraabiyaal afar xabo ah, Bumbada Naaftada, Ganeetooyin iyo Jiktaro).
Waraabiyayaasha: waa khasabado dhexda kaduleela waxaana ku xiran bool dhexda ka duleela oo ay dhexmarto Olyada katimaada Bumbada waxa uuna waraabiyaa Buushka iyo Biyeelaha Galaasyada.
Bumbada: Bumbadu waxay soo burqisaa Naaftada waxayna kasooqadaa Taangiga Naaftada, waxayna ugudbisaaa Ganeetooyinka Naaftada. Ganeeetooyinku waxay ugudbiyaan Jiktarada, kadib Jiktaradu waxa ay naaftada siiyaan Bostomada.
Balookadu waa shayga ay iskugu yimaadan dhamaan qalabka Matoorka, waana qaybta dhexe ee Matoorka waxaana gaar ahaan u hoostaga; Salafka, Diinimada, Bamka haydarooliga, Bamka aysiiga, Bamka olyada, Marawaxadaha, Falaashta biyaha, Bambojiida, Ganeetooyinka, Qabojiyaha ama (kuularta), Bostmada, Biyeelaha, Galaasyada, Lamdadaha, Sifeeyaha Olyada iyo agab kale.
Agabka ay ka midaysan yihiin matooradu:
Matoorka naafto ah ee ijekshanka (otimatik ama maskax) ah waxa uu leeyahay:
Wii [waxaa leh otimatikga (maskaxda)]
Matoorka baasiinka ah ee kaalbeedherka ha waxa uu leeyahay:
Isbiindo (waxaa leh maanuwalka)
Habka ay ushaqeeyaan bostommadu:
Marka shidaalka lakululeeyo waxaa siyaadaya socodka qurubyada uu shidaalku kakooban yahay, waxa uuna soosaaraya cadaadis badan oo ay soo cadaadinayaan mugga ay kujiraan. Sidaa darted Bostamadu waxa ay qabtaan labo shaqo:
Qaadasho: marka koowaad bostamadu waxa ay qaadanayaan hawo iyo shidaal isku jira oo ay kaqaadanayaan waalka hawada iyo waalka shidaalka kadibna waalku waa uu xirmayaa.
Cadaadis: bostonku waxa uu soocadaadinayaa hawadii iyo shidaalkii uuqaatay asaga oo yaraynaya mugga ay kujiraan, kadib Balaaga ayaa qarxinaya isku jirkaas(Haw iyo Shidaal), qaraxaas dhacayana waxaa loogu yeeraa gubasho.
Shidaalka gubtay waa uufaafayaa, Bostankana hoos ayuu ucelinayaa ilaa uu kagaarayo salka, kadib kiriinka ayaa bostonka kor usooqaadaya, bostonkuna waxa uu dib usoocadaadinayaa shidaalkii gubtay kadib waxaa furmaya Waalka hawo saarida, halkaas oo ay kabaxayso shidaalkii gubtay. Kadibna bostonku waxa uu qaadanaya shidaal iyo hawo isku jira, sidii bayna shaqadu usiisoconaysaa.
Bostomada: waa mesha uu kabilowdo ama uu kadhasho dhaqaaqa baabuurku. Bostamada waxaa kadhex dhaca qarax iyo gubasho kadhasha shidaalka iyo hawada uu qaato matoorku. Bostamadu waxa ay kujiraan galaasyada dhexdhexooda, galaasyadaas oo kujira balookada.
2. Olyada baabuurka:
Nidaamka saliidaynta baabuurka: waa nidaam saliida loogu gudbinayo qaybaha matoorka ee wareegaya, si looga hortago in aysan dhicin islisid iyo isxoqitaan.
Olyadu waxay ku kaydsantahay sootakoobada waxaana kasooqaada bamka Olyada. Bamka waxa uu leeyahy meel ay Olyadu kasoogasho iyo meel ay kabaxdo. Meesha ay kasogasho waxaa tuubo afka shaandho kuleh, meesha ay Olyadu kabaxdana waa dhuun dhexmarta Balookada waxayna udalooshaa Filterka olyada sifeeya, si wixii wasakh ah uga haraan olyada.
Guud ahaan Olyooyinka waa dufan loogu talogalay in ay kala ilaaliyaan biraha wareegaya. Olyooyinka Matoorku waa labo qaybood; (1) oil 40 iyo (2) oil 50. Sidoo kale, waxay usii kala baxaan labo qaybood oo kale olyo batrool iyo olyo diesel. Olyada 40 waxa isticmaala baabuurta yaryar, olyada 50 ahna waxa isticmaala baabuurta waawayn.
Olyada kaambiyihu isticmaalo waa labo nooc; Olyo geer 90 iyo Olyo haydaroolig 33. Olyo geer 90 waxaa isticmaala kaambiyayaasha geerka(manual) ah, Olyo haydaroolig 33 gana waxaa isticmaala kaanbiyayaasha Otimaatiga (automatic) ah. Candhooyinku waxa ay isticmaalaan Olyo geer 140.
Tags: Barashada Cilmiga Baabuurta: Matoorka Iyo Olyada Baabuurta
Next post Hantida Kheyraad Ee Ku Jirta Insaanka
Previous post Waa Maxay Waalida Lagu Arko Hooyada Marka Ay Dhaso Kadib?